धेरै दिनपछि आज काठमाण्डौ`मा सवारी साधन, पसल र क्या`फे`हरु खुलेका छन् ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/धेरै दिनपछि आज काठमाण्डौ`मा सवारी साधन, पसल र क्या`फे`हरु खुलेका छन् !
सरकारी कार्यालय, बैंक, कृषि, उद्योग तथा कलकारखाना खुल्न थालेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा चहल पहल बढेको छ । उपत्यका`का मुख्य र भित्री सडकमा मानिसको भीड बढेको छ भने अत्यावश्यक बाहेकका साम`ग्री पसलसमेत खुलेका छन् ।
सरकारले विभिन्न कार्यालय र उद्योग खोल्ने निर्णयका कारण चहल पहल बढ्नु स्वाभाविक भए पनि कतिपयले उपत्य`कामा ‘लकडाउन’ खुकुलो भएको भन्ने बुझा`इका कारण काम नपरी पनि घर बाहिर निस्कन थालेको पाइन्छ । पहिले बिहान, साँझ मात्रै खुल्ने खाद्या`न्नको पसल जुनसुकै समय खोल्ने प्रशासनको निर्णयका कारण पनि उपत्य`का विभि`न्न भागमा दिनभर जसो मानिसको आवत`जावत देखिएको छ ।
कतिपयले सवारी साधन बाक्लो हुँदा सडकमा जाँच हुँदैन भनेर पनि नि`स्केको पाइएको छ । कतिपय व्यक्ति अब त लकडाउन खुकुलो छ भन्दै घु`म्न निस्केको पनि भेटियो । सीमित क्षेत्रमा मात्रै खुकुलो बनाइए पनि धेरैमा पहिले जस्तै पालना गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नभएको वा थाहा भए पनि प्रहरी कम परिचालन हुन्छन् भन्ने सोचेर बाहिर निस्केको पाइएको छ ।
उपत्य`कामा निर्माणका लागि आव`श्यक हार्डवे`यर पसल खुल्ने भनिए पनि कतिपय स्थानमा चिया पसल, क्याफे, कस्मेटिक्स लगायत पसल समेत खुलेको देखिन्थ्यो ।नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले भने कार्यालय र उद्योग खुलेपछि आव`तजावत बढ्नु स्वाभा`विक भएको बताएको छ । महा`नगरीय ट्राफिक प्रहरी महा`शाखाका प्रवक्ता (प्रहरी उप`रीक्षक) जीवन श्रे`ष्ठले चहल`पहल बढ्दा सवारी पासको दुरुप्रयोग बढ्न सक्ने भएकाले जाँच बढा`इएको बता`उनुभयो ।
लक डाउनको शुरुको साताभन्दा पछिल्लो समय पासको दुरुप्रयोग बढिरहेको उहाँले बता`उनुभयो । ट्राफिक प्रहरीले वि`भिन्न स्थानमा जाँच पनि बढाएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पहिले भन्दा जाँच अझ कडाइ गरिरहेका छौँ ।”
आइतबार दिउँसो सम्म सवारी पासको दुरुपयोग गर्ने चार पाङ्ग्रे १०२ र दुई पाङ्ग्रे ४५८ गरी ५६० सवारी साधनलाई ट्रा`फिक प्रहरीले कार`वाही गरेको छ । दैनिक ७०० देखि ८०० सम्म सवारी साधन कार`वाहीमा परिरहेको उहाँले बता`उनुभयो । अहिले खुलेका कार्याल`यमा जन`शक्ति र सवारी साधनको प्रयोग सहीरुपमा भइरहेको छ/छैन भनी निय`मनको जि म्मेवारी सम्ब`न्धित मन्त्रा`लयको सचिवलाई दिइएको छ । त्यस सँगै ट्राफिक प्रहरीले पनि जाँच गरिरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “गल्ती भेटिँदा कार`वाही पनि भइरहेको छ ।”
आजको बैठकले गर्यो यस्तो निर्णय : भोलि बाट अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द !